Tahriibayaal 40 Maalmood Markab badda lala dhex-meeraysanaayey markii dal waliba diidey oo Aakhirkii la dejiyey,Dalkeese qaabilay? | Qaran News
Tahriibayaal 40 Maalmood Markab badda lala dhex-meeraysanaayey markii dal waliba diidey oo Aakhirkii la dejiyey,Dalkeese qaabilay?
Writen by Qaran News | 3:01 am 14th Sep, 2020
Tahriibayaal 40-ka maalmood Markab badda lala dhex-meeraysanaayey markii dal waliba diidey oo Aakhirkii la qaabilay
Markabki Maersk Etienneoo badbaadiyey bilawgii August
Koox tahriibayaal ah oo uu soo badbaadiyay markab laga leeyahay dalka Denmark oo ku sugnaa badda Mediterranean-ka ayaa loo ogolaaday inay ku degaan dalka Talyaaniga kadib in ka badan 40 maalmood oo ay badda ku jireen.
27-ka qof – oo ay ku jirto haweeney uur leh – waxay ka amba baxeen Liibiya 2-dii bishii Ogosto.
Markabkii Maersk Etienne ee Dheenishka ahaa ayaa soo qaaday waxyar kadib markii markabkoodii uu bilaabay inuu quuso.
Sida laga soo xigtay wadaha markabka Maersk Tankers, masuuliyiinta Malta waxay ka codsadeen shaqaalaha markabkani inay qaabilaan tahriibayaashan. Malta ayaa beenisay, waxayna sheegtay in badbaadintu ka dhacday meel ka baxsan dhulkooda.
Tani waxay horseeday is-faham, iyadoo Talyaaniga iyo Liibiya ay sidoo kale diideen inay qaataan kooxdan, ayuu yiri Maersk.
Haweeneyda uurka leh oo iyana la yidhaahda- Embetta, oo reer Cameroon ah – ayaa iyana u sheegtay suxufiyiinta: “Kaliya waxaan dooneynay caawimaad, waxaan dooneyna uun inaannu ka degno markabkan.”
Warar ay qoreen warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegaya in sidoo kale ay saarnaayeen tahriibayaal ka yimid dalalka Chad, Eritrea iyo Libya.
Maalmihii la soo dhaafay saddex ka mid ah muhaajiriinta ayaa xitaa ku booday badda si ay isugu dayaan inay is dilaan. Waxaa se mar labaad badbaadiyey shaqaalihii markabka. Waxyna sheegeen in qaarkood isku dayeen inay sidaas oo kale is dilaan ama naftooda waxyeelaan.
Maxaa ka dhacaya badda Mediterranean-ka?
Ilaa 19,400 oo tahriibayaal ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga ilaa iyo sannadkan, marka la barbardhigo qiyaastii 5,200 isla muddadan oo kale sanadkii la soo dhaafay, sida lagu sheegay xog rasmi ah oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxaa se isweydiintu tahay sida loola macaamilayo soo-galootigan tirada badan, inta badan Talyaaniga iyo Griiga, ayaa ku kala qaybsamay Midowga Yurub sannado badan qaabilaadooda.
Talyaaniga iyo Giriigga waxay ku eedeeyeen waddammada waqooyiga ee hodanka ah inay ka gaabiyeen inay wax badan qabtaan, halka tiro ka mid ah wadamada bartamaha iyo bariga ay si cad uga hor imaanayaan fikirka ah inay qaataan qoondada kaga soo hagaagta muhaajiriinta.
Guddiga Yurub wuxuu soo bandhigi doonaa heshiis cusub oo ku saabsan socdaalka iyo magangalyada 30 Sebtember.
1296 Vistors Online
Fadeexad Weyn:Daawo,Haweenay Nadiifiso ahayd u ahayd Ex-wasiir Max'ud Xaashi oo soo bandhigtay Tacadiyadii uu kula kacay
Degdeg:Daawo,Nuxurka Kulan xasaasiya oo Ambassador Hotel ku dhexmaray Ergada dhexdhexaadinta & Hogaanka Xisbiyada Ucid & Waddani
Daawo:Boqor Buurmadow oo Fagaare ugu quusgooyey Suldaanka Guud ee Subeer-awal+Fariin uu u soo xanbaariyey
Daawo:Boqor Buurmadow oo ku shinbira waaqleeyay Suldaanka Guud ee Beelaha Subeer Awal oo Axdigii uu la galay faro madhan ka jooga
Degdeg:Daawo,Sidii F.C.Waraabe loogu soo dhaweeyay Madaarka Hargeysa+Nuxurka Khudbad xasaasiya oo uu jeediyay
Madaxda Africa ee hada talada koogaa waxa looga fadhiyaa in...
Wax ka baro Suldaankii ugu danbeeyay ee Carabka ahaa ee maamuli jiray Afrika?
Wargeyskii ugu horeeyay ee loogu talogalay dadka aragga la’ oo laga soo saaray Afrika
Xildhibaanada Barlamaanka Somalia oo Codka Kalsoonida siiyey Ra’isul Wasaaraha cusub ee Farmaajo xushay
United Nations Development Programme (UNDP) Photoville exhibit shines a light on the far-reaching consequences of COVID-19
Isbedalada gobolka geeska Africa iyo isku eekaanshaha
Daawo:Darawal ku faanayay Quwadda Gaadhigiisa oo dirqi ku bad-baaday
Warbixin:Qarax burburiyay 'bakhaarkii hubka ee Xisbullaahi'
China Injects Hundreds of Thousands With Experimental Covid-19 Vaccines - WSJ
Geedkii Godobta laga Galay: Astaantii Qaylodhaanta Deegaanka AyeyGalaafteen
Major European nations report new COVID-19 cases
Naqdi Buugga Soomaaliga F. 4aad ee dugsiyada sare: Nuqulka Soo Baxay 2020 W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
Trafigura PastScandals and Corruption Schemes